Ozinina LNG Liquefaction Plant | China LNG Liquefaction Plant Manufacturers, mpamatsy
Ny singa famokarana LNG 3MMSCFD namboarina sy ny fizotran'ny vata fampangatsiahana LNG
Ny vokatra amin'ity vondrona ity dia entona voajanahary liquefied (LNG).Araka ny singa amin'ny entona famahanana omen'ny tompony, ny kajy ny dingana dia atao amin'ny alàlan'ny rindrambaiko fanodinana dingana mandroso.
Ny toetran'ny vokatra LNG dia aseho eto ambany.
9 MMSCFD manokana LNG Liquefaction Plant
Toetran'ny LNG a) Ny fangaro LNG / LCBM dia fifangaroana hydrocarbon miaraka amin'ny metana ho singa fototra, izay misy etana kely, propane, nitrogen ary singa hafa izay matetika misy ao anaty entona voajanahary. Amin'ny ankapobeny, ny votoatin'ny metana ao amin'ny LNG / LCBM dia mihoatra ny 80% ary ny votoatin'ny azota dia ambany noho ny 3%. Na dia metana aza ny singa fototra amin'ny LNG, ny toetra ara-batana sy simika an'ny LNG dia tsy azo tsoahina amin'ny metana madio. Ny toetra fizika sy thermodynamic...
Sliding liquefaction entona voajanahary
Ny entona voajanahary liquefaction, antsoina hoe LNG, dia mampitony ny entona voajanahary ho ranon-javatra amin'ny alàlan'ny fampangatsiahana ny entona voajanahary amin'ny fanerena ara-dalàna ho -162 ℃. Ny liquefaction entona voajanahary dia afaka mamonjy toerana fitehirizana sy fitaterana, ary manana tombony amin'ny sandan'ny kaloria lehibe, fampisehoana avo lenta, mifanaraka amin'ny fifandanjana amin'ny lalànan'ny enta-mavesatra an-tanàn-dehibe, manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, mampihena ny fandotoana an-tanàn-dehibe sy ny sisa.
10~30 × 104Nm3/d LNG liquefaction lehibe
Ny liquefaction entona dia afaka mamonjy toerana fitehirizana sy fitaterana, ary manana tombony amin'ny sandan'ny kaloria lehibe, fampisehoana avo lenta, mifanaraka amin'ny fifandanjana amin'ny fitsipiky ny enta-mavesatra an-tanàn-dehibe, manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, mampihena ny fandotoana an-tanàn-dehibe sy ny sisa.
namboarina 50×104m3 / D orinasa fandoroana entona voajanahary
Ny singa fototra dia ahitana ny fanerena entona famahanana, ny decarbonization unit, ny dehydration unit, ny mercury sy ny mavesatra hydrocarbon fanesorana unit, ny liquefaction unit, ny fitahirizana ny refrigerant, ny fanerena ny etona tselatra, ny toeram-pambolena tanky LNG ary ny trano fandefasana entana.
Terminal LNG manokana ho an'ny entona voajanahary liquefaction
Ny terminal LNG dia fitambarana organika misy fivorian'ny fitaovana mifandraika amin'izany. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo fitaovana ireo, ny LNG entina an-dranomasina dia azo tehirizina ao anaty tanky fitehirizana LNG ary aondrana any amin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fizotran'ny dingana sasany. Ireo fitaovana ireo dia ahitana sandry fanalana entana, tanky fitehirizana, paompy famindrana tsindry ambany, paompy fanerena avo lenta, carburetor, compressor bozaka, Flare Tower, sns.
1~5 × 104NM3/D LNG LIQUEFACTION LEHIBE
Ny teboka fandrehetana ny LNG dia 230 ℃ ambony noho ny an'ny lasantsy ary ambony noho ny an'ny gazoala; Ny fetra fipoahan'ny LNG dia 2.5 ~ 4.7 heny noho ny an'ny lasantsy; Ny hakitroky ny LNG dia manodidina ny 0.43 ary ny an'ny lasantsy dia manodidina ny 0.7. Maivana noho ny rivotra izy io. Na dia misy fivoahana kely aza, dia hikorontana sy hiparitaka haingana izany, mba tsy hisian'ny fandoroana sy fipoahana ho azy na hamorona ny fetran'ny fipoahana raha misy afo. Noho izany, angovo azo antoka ny LNG.
LNG Liquefaction Plant dia fitaovana hamokatra entona voajanahary liquefied, izay karazana entona voajanahary ranon-javatra efa nokarakaraina mialoha sy nalaina tamin'ny hafanana ambany. Raha ampitahaina amin'ny entona voajanahary mahazatra, dia manana sanda ambony kokoa sy fahadiovana izy io, izay mety amin'ny fitehirizana sy ny fitaterana. Amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny entona voajanahary, ny entona voajanahary liquefied dia ho ampahany manan-danja amin'izany ary ho fanampin'ny gazy voajanahary fantsona.